Ciyaarihii ugu dambeeyay ee bilaashka ah ee Android - Sii deynta, Faallooyinka, Xeeladaha | Androidsis (Bogga 12)
Royal Revolt 2, goolal badan oo lagu dagaallamo
Royal Revolt 2 wuxuu isku daraa istiraatiijiyad iyo difaaca munaaradda.
Cusbooneysiinta Arena ee cusub ee loo yaqaan 'Dead Trigger 2' ee fiidiyoowga ah
Fiidiyow yar-yar oo muujinaya 30 ilbiriqsi gudahood waxa soo socda Arena ee loogu talagalay Dead Trigger 2 wuxuu noqon doonaa.
The RPG Rise of Mana oo lasii dayn doono xagaagan Square Enix
Xagaagan soo socda Rise of Mana waxaa sii deyn doona Square Enix. Cinwaan cusub oo Dunida qadiimiga ah ee Mana saga.
Mad Skills Motocross 2 waxay ugu dhowdahay sidii ay uxayeysiin laheyd
Turborilla waxay dhawaan sii deysay Mad Skills Motocross 2, oo ay weheliso trailer xariif ah.
Candy Crush Saga waxay isku diyaarineysaa gelitaankeeda Suuqa Suuqa Suuqa ee New York
Warku wuxuu na soo gaadhayaa in King, oo ah milkiilaha Candy Crush Saga, uu qorsheynayo inuu dadweynaha u bandhigo Suuqa Kala Iibsiga ee New York.
Nooc cusub oo loogu talagalay Dunida Pixel oo leh qolal aan qaab-dhismeed lahayn, xusuus-qor gododon iyo inbadan
Pixel Dungeon waa mid ka mid ah ciyaaraha gaarka ah ee Android ee gabi ahaanba bilaash ah, iyada oo aan lahayn xayeysiin iyo wax iibsi.
Caleemaha Madoobaadka Madoow! waa ciyaar arcade oo leh waxyaabo muhiim ah oo RPG ah
Caleemaha Madoobaadka Madoow! waa arcade leh waxyaabo RPG ah oo leh muuqaallo wanaagsan oo bixiya qaabeyn dabeecad leh kudhowaad 1000 dhismo oo kala duwan.
Ku noolow dhammaadka usbuuca Dhammaan Xiddigaha NBA JAM ee Boom Shaka Laka
Iyada oo ay suurtagal tahay casriga casriga ah ee Android, ciyaar sida NBA Jam ah ayaa lagu arkaa dhammaan quruxdeeda iyo weynaanteeda.
Qarsoon iyo xujooyinka qolka Labaad hada waxaa laga heli karaa Android
Qolka Labaad waa ciyaar fiidiyow oo gaar ah oo hadda timid Dukaanka Play-ka kaas oo ku hor dhigaya daraasiin xujooyin ah oo aad xallin doonto.
Terraria waa la casriyeeyay gaar ahaan maalinta Jacaylka
Terraria waa ciyaar weyn oo ka tirsan qaybta Sandbox oo heshay nooc cusub oo ay ku jiraan walxo cusub iyo khariidad adduunka ah.
Cusbooneysiin weyn oo loogu talagalay Maalinta Hay maalinta xaafadaha, habka quusin iyo waxyaabo kale oo badan
Hay Day ayaa maanta leh nooc cusub oo keena xaafado, taas oo ah muuqaal ballaarin doonta fursadaha kulankaan weyn.
Towers Battle waxay keenaysaa nuxurka Warcraft Android-kaaga
Dagaallada Towers waa ciyaar istiraatiijiyad-waqtiga dhabta ah oo lagu dejiyay adduunyo qadiimi ah oo aad u horseedi doonto xoogagga wanaagga guusha.
Music Inc. ayaa kaa dhigaysa maamule muusig
Muusikada UK waxay soo bandhigtay ciyaar maamul oo diirada saareysa matalaada fanaaniinta iyo kooxaha muusikada, Music Inc.
Tijaabada muusikada iyo muuqaalka ee kooxda muusiga Radiohead ee loo yaqaan PolyFauna
PolyFauna waxay kuu kaxayn doontaa aduunka hal abuurka ah ee kooxda muusikada ee Radiohead, taasoo noo keeneysa tijaabo muuqaal iyo muusig ah oo ku saleysan heesta "Bloom"
4 ciyaarood oo dheeri ah oo ka socda abuuraha Flappy Bird oo ku garaacaya webka
Flappy Bird waa guul meel kasta oo aad ka eegtidba. Maanta waxaan kuu sheegeynaa sidee looga heli karaa 4-ta kulan ee kale ee hal abuuraha ah taleefan casri ah.
Minigore 2: Zombies wuxuu ku soo laabtay Play Store
Jawharad la mid ah Minigore 2: Zombies ayaa dib ugu soo laabtay Bakhaarka ciyaarta si bilaash ah looga soo dejiyo.
Sida loogu garaaco asxaabtaada Flappy Bird
Flappy Bird waxay heleysaa fududaanta inay noqoto balwad iyo in malaayiin ay ku rakibtay boosteejooyinkooda.
Flappy Bird sameeysa ayaa sameeya $ 50000 maalintii
Flappy Bird waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu fudud ee aad ka heli karto, laakiin dhibaatadeeda aadka u daran ayaa ka dhigeysa mid ka mid ah ciyaaraha fiidiyowga ee ugu da'da yar.
Dagaalkii 5aad ee casriga ahi waa yaab yaab leh oo muuqaal ah
Gameloft's awooddiisa garaaf ee cusub, Modern Combat 5, ayaa imaan doonta iyadoo lagu hagaajinayo qalabka siddeed-geesoodka ah ee 'Mediatek'.
Pixel Dungeon ayaa suurtogal ah inuu yahay ciyaarta ugu fiican RPG ee ku saabsan Android
Pixel Dungeon wuxuu leeyahay astaamo qaarkood oo maanta umuuqda inaysan run aheyn, sida inay lacag la’aan tahay, oo aan lacag yar lagu bixin iyo ogolaansho la’aan marka la rakibayo.
Qarsoodiga iyo kaftanka ee Baadhista Grimoire
Baadhe Grimoire waa dhibic n 'guji tacabud garaaf ah oo leh iskudhaf noocyo u dhexeeya qarsoodi iyo majaajillo
Robocop hadda waxaa laga heli karaa Play Store
Robocop waa ciyaarta filimka rasmiga ah ee ay sameysay Glu Games ee loogu talagalay Android iyo iOs waxaana hadda laga heli karaa Play Store.
Square Enix waxay soo bandhigtay Final Fantasy VI on Android
Final Fantasy VI waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan RPG-ga ee waqtiga oo dhan waana horayba dukaanka Play-ka iibsiga.
F1 Challenge, shati lumis weyn
Codemasters waxay bilaabayaan cinwaanka Formula 1 ee mobilada, F1 Challenge, oo aan ahayn wixii laga filayay.
Warriors daa'in 3 by Glu hadda waxaa laga heli karaa Play Store
Warriors daa'in 3 by glue waxaa lagu sii daayay on Android bixiya gameplay wanaagsan iyo sawiro heer sare ah.
Malaa'igta waa ciyaar Diablo-qaab ah oo ay abuureen Unity Games
Haddii aad rabto inaad ku haysato waxoogaa Diablo ah kaniinigaaga ama casrigaaga, Malaa'igta ayaa laga yaabaa inay tahay ikhtiyaarka ah inaad ku raaxaysato ciyaar godxabeed wanaagsan.
Springfield, saacado iyo saacado leh 'The Simpsons'
Springfield waa mid ka mid ah cinwaannadaas "à la Farmville" ee ka soo gudbay qaabkeedii. Iyo, shaki la'aan, u qalmay.
Sonic Racing Transform ayaa ku dhacay dukaanka ciyaarta
Sonic Racing Transform ayaa sanadkii hore ku yimid Consoles waxaana hada laga heli karaa Play Store si uu kuugu keeno tartamo karting waalan.
Avenged Sevenfold ayaa sidoo kale yeelan doona ciyaarta fiidiyowga
Kooxda miisaanka culus Avenged Sevenfold waxay lahaan doonaan kulankooda fiidiyowga: Hail to the King.
Wicitaanka Waajibaadka: Kooxda Strike waxay ku kordhisay aalado badan oo Android ah qiime jaban
Wicitaanka Waajibaadka: Kooxda Strike Team ayaa ku soo wacaya haddii aad haysato mid ka mid ah aaladaha cusub ee la jaan qaadi kara isla markaana u dabaaldegaya tan, qiimaheeda ayaa hoos loo dhigay 2,19 XNUMX.
Halxiraalaha & Dragons, waa dhacdo mobilo cusub
Waxaan ka hadleynaa Xujo iyo Diraajo, dhacdadii sanadkii hore ka dhacday Japan.
Savant: Ascent, mix of dubstep iyo retro gooth
Aynu ku dhexgalno dagaallada gothic muusikada dubstep ee soo saare noorweji ah waxaanna leenahay Savant: Ascent.
Keydso Ciyaaraha Birds ee Kaarkaaga SD
Angry Birds Backup 2SD waxay na siisaa shaqooyin aad u baaxad weyn oo ah keydinta horumaradayada shanta kulan ee Angry Birds.
Dhamaan ciyaaraha Disney waxay hoos u dhigeen qiimaha 75% ee kirismaska
Disney waxay galisay gabi ahaanba buugyaraha ay ku ciyaareyso Android qiimaha € 0,49 with iyadoo 75% laga dhimayo dhamaantood.
Colossatron, oo ah kii ugu dambeeyay ee Istuudiyaha Halfbrick, hadda waa la heli karaa
Wiilashii Istuudiyaha Halbrick waxay ugu dambeyntii sii daayeen Colossatron: Hanjabaad weyn oo adduunka ah
Shanta kulan ee ugu wanaagsan ee Android ee lagu bixiyo Kirismaska
Shan cinwaan oo kuwa ku hela hadiyado ahaan Kirismaskan ayaa hubaal wejigooda ka muujin doonta dhoola-caddayn.
Belaayada Inc. Is-beddelka 7 Hadda Ayaa Lagu Heli Karaa Mawduuc Cusub
Belaayada Inc waa mid ka mid ah ciyaaraha istiraatiijiyadeed ee leh qayb ka mid ah aakhiro-abuurka. Nooca cusub ee Mutation wuxuu ku darayaa waxyaabo badan.
Turbo, snail-ka duulaya ayaa ku soo dhacaya Android-kaaga
Turbo FAST waa ciyaar ka mid ah filimkii DreamWorks ee Turbo kaas oo Snail uu fulinayo riyadii ahayd socodsiinta Indianapolis 500.
Shimbiraha careysan ee Star Wars waxay helayaan cusbooneysiintii ugu dambeysay
Rovio wuxuu sii deynayaa cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Dagaalkii Xiddigaha Xiddigaha Xiddigaha, Dhimashada Xiddiga 2.
Xatooyo Grand Auto San Andreas ayaa hadda laga heli karaa Play Store
Xatooyo Grand Auto San Andreas hadda waxaa laga heli karaa Play Store si loo iibsado. Mid ka mid ah cinwaannada ugu wanaagsan ee sheekada GTA ayaa hadda lagu ciyaari karaa Android
Dead Trigger 2 wuxuu helayaa cusbooneysiin weyn oo leh hadiyadaha fasaxa
Dead Trigger 2 waa mid ka mid ah toogashada ugu fiican ee aad ka heli karto Google Play Store taasna waxay muujineysaa suurtagalnimada in kaydka Android.
Tababarka Android, oo sharraxaya sida loo abuuro loona maareeyo emulators ama AVDs, sida loo abuuro qeexitaannada aaladda, iyo xaddidnaanta farsamadan.
Micropayments-ka ku jira Android, Shimbiraha careysan ayaa tagaya!
Hadaad tahay Shimbiraha Xanaaqsan GO! Jooji xoqida indhahaaga sida aad u maleyneyso inay tahay wax cajiib ah waa xaqiiqda ugu nadiifsan, Rovio wuxuu furay macropayments.
Ciyaarta dhabta ah ee sii kordhaysa Ingress ayaa ugu dambayntii ka soo baxday beta furan
Ingress waa ciyaar xaqiiqada lagu kordhiyay Google oo ka soo baxday beta furan maanta qof walbana wuu heli karaa.
Sonic the Hedgehog 2 wuxuu ku yimaadaa Android heer cusub, multiplayer khadka toosan ah iyo inbadan
Sonic The Hedgehog 2 waxaa loo cusbooneysiiyay aaladaha mobilada ee bixiya astaamo cusub iyo sawiro la hagaajiyay oo ka farxin doona taageerayaasha taxanaha ah.
Minecraft Pocket Edition ayaa lagu cusbooneysiiyey miisaska miinada, kororka masaafada wax bixinta iyo waxyaabo kaloo badan
Minecraft Pocket Edition waxaa lagu cusbooneysiiyaa astaamo badan oo cusub sida fogaanta wax bixinta, gawaarida miinooyinka, baloogyo cusub iyo kuwo kaloo badan
Dhirta iyo Zombies 2 waxay heleysaa Cusbooneysi ballaaran oo leh Habka Turbo, Dunida Cusub, iyo Inbadan
Dhirta iyo Zombies 2 waxay heshaa cusbooneysiin weyn oo ka dhigeysa ciyaar ka fiican taas oo kuu oggolaaneysa inaad sahamiso dhammaan wejiyada adigoon lacag ku qarashgareynin.
Digniinta Android: Iska jir ciyaarta BalloonPop 2 waa barnaamij basaasnimo ah oo loo yaqaan 'Whattsapp app'
Digniintan ayaa noo soo gaadhay iyada oo ah codsi xaasidnimo ah oo basaasi kara wadahadalka lambar kasta oo lala xidhiidhiyo Whattsapp.
Nooca caadiga ah ee ka dhexeeyaa fasalada Double Dragon Trilogy ayaa laga heli karaa Play Store
Double Dragon Trilogy hadda waxaa laga heli karaa Android oo leh saddex cinwaan hal midna lehna gameplay loogu talagalay moobiilka.
Dead Trigger 2 wuxuu helaa nooc cusub wuxuuna leeyahay mid gaar ah oo loo diyaariyey Kirismaska
Dead Trigger 2 waa mid ka mid ah toogashadayaasha ugu wanaagsan ee aad ka heli karto Google Play Store oo helay nooc cusub.
Raadinta caadiga ah ee Colin McRae Rally ayaa ku soo socota Android
Mid ka mid ah ciyaaraha fiidiyowga ee caadiga ah marwalba shaki la'aan Colin McRae Rally, oo lagu sii deyn doono Android bilaha soo socda.
Infectonator - Ka tirtir bini'aadanimada Freddy, Jason ama JigSaw adoo abuuraya holocaust zombie ah
Si bilaash ah Google Play Store, Infectonator wuxuu kaa dhigi doonaa waqti fiican, wuxuu kugu beerayaa argagixiso aduunka adoo kaashanaya Freddy Krueger iyo inbadan.
Sega wuxuu bilaabay Sonic Dash ee Android a la Temple Run
Sonic Dash waa cinwaanka cusub ee Sega uu ku bilaabay Android a la Temple Run, oo wuxuu awood u leeyahay wax kasta oo horseeday guusha taxanaha.
Auto Xatooyo Grand: San Andreas wuxuu yimaadaa Android bisha Diseembar
Lama filaan ah in la helo warka ah in tuuganimada xatooyada ee Grand: San Andreas ay timaado Android bishaan Diseembar iyada oo diyaarinaysa kirismas si ay ugu raaxaystaan.
Ku maaree beertaada Maalinta Hay
Cinwaanka beeraha diirada saaraya abuurayaashii Dagaalkii Qabiilooyinka, Hay Day, ayaa imika baxay.
Caddaalad darrada: ilaahyada naga mid ah waxay ku habeysaa nooca desktop-ka nooc xariif ah oo free2play ah.
Barnaamijka Beta ee loogu talagalay Minecraft Pocket Edition iyo nooca 0.8.0 ee loogu talagalay Kirismaska ​​kahor
Mojang wuxuu bilaabay barnaamijka beta ee loogu talagalay Minecraft Pocket Edition wuxuuna ku dhawaaqay nooc cusub oo imaan doona kahor Kirismaska.
Barnaamijka saaxiibka ah ee Battlefield 4 Taliyaha oo u socda Android
Taliyaha dagaalka 4 wuxuu ku siinayaa Android-kaaga awood aad ku noqon karto taliyaha kuna hogaamin kara asxaabtaada kooxda guul.
Dagaalkii caadiga ahaa ee Boqorka Dagaalyahannada 97 wuxuu yimaadaa Android
King of Fighters 97 xitaa waxaa ku jira qaab ciyaartoy badan si dib loogu abuuro ciyaaro aan ku raaxeysan lahayn muddo dheer fasalkan caadiga ah.
Beeraha Qabille 2014 ayaa hadda laga heli karaa Google Play oo leh qaab ciyaartoy badan
Beeraha Qabille 2014 wuxuu muujinayaa shaqada wanaagsan ee kooxda horumarinta ka dambeysa jilitaanka weyn ee Android.
Sega wuxuu bilaabay Maamulaha Kubadda Cagta 2014
Maamulaha Kubbadda Cagta 2014 wuxuu si toos ah kuu gelinayaa kabaha tababare ee shirkadda caanka ah ee Sega.
Gameloft's GT Racing 2 ayaa hadda laga heli karaa Google Play
GT Racing 2 waxay u timaadaa Google Play nuuca buuxa oo leh tiro badan oo gawaari ah oo laga kala xusho iyo qaab ciyaartooy badan.
Dagaalada Haanta waa cusub oo ka yimid Gameloft ee loogu talagalay Android
Ciyaar la sii daayay dhowr sano ka hor oo ku saabsan XBLA iyo PSN oo ah Dagaalkii Taangiyada ayaa ah kii ugu dambeeyay ee Gameloft.
Candy Crush Saga wuxuu gaarayaa 500 milyan oo laga soo dejisan karo Facebook, Android iyo iOS
Candy Crush Saga ayaa ku faafay Facebook, Android iyo macruufka sannadkan ciyaar ay wada ciyaari karaan qof kasta oo qoyska ka tirsan.
Thor: Dunida Madoow hadda waa la heli karaa
Si lama filaan ah, Thor: Dunida Madow waxay timid Android, toddobaad ka hor inta aan filimka lagu sii deynin Mareykanka.
DotEmu waxay u wareejineysaa laba geesoodka Double Dragon ee Android
Double Dragon, oo ah mid ka mid ah mashiinada ciyaarta fiidiyowga ee waagii hore, ayaa imaan doona Android iyada oo loo mahadcelinayo DotEmu oo leh sedex gees isla cinwaanka.
Shan ciyaarood oo cabsi leh habeenkan Halloween
Dhirta iyo Zombies 2, Boqortooyada Rush Frontiers, Dead Trigger 2, Terraria iyo Plague Inc waa shan ciyaarood oo cabsi leh oo kugula socon doona adiga Halloween.
Damn Castilla horeyba waxay ugu jirtay OUYA
Damn Castilla de Locomalito mar hore ayuu kujiraa OUYA
Sheekooyinka caanka ah ee 'Star Wars' ayaa ku yimaada Android iyadoo loo yaqaan 'Tiny Death Star' (Download APK)
Ciyaarta cusub ee Star Wars waxay la imaaneysaa Android iyadoo la socota Tiny Death Star, oo ah jilitaanka dhismaha ee caanka ah Mogabe iyo Tiny Tower.
Wicitaanka Waajibaadka: Kooxda Strike, hadda waa baxday
Hadda waad ku raaxeysan kartaa Wicitaanka Waajibaadka ee mobilkaaga ama kaniinigaaga. Wicitaanka Waajibaadka: Kooxda Strike ayaa hadda maqan.
Dead Trigger 2 ayaa hadda loo heli karaa Android
Dead Trigger 2 ayaa hadda laga heli karaa Android, qaybta xigta ee toogtaha caanka ah waa lagala soo bixi karaa oo laga soo dejin karaa Google Play.
Dhirta VS Zombies 2 hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo
Ugu dambeyntii waxaa yimid qeybtii labaad ee muddada dheer la sugayay ee dhirta VS Zombies saga. Dhirta VS Zombies 2 waxaad ku raaxeysan doontaa ciyaartan ficil ee xiisaha leh laba jibaar.
Farshaxanka elektarooniga ah ayaa ka shaqeynaya nooc ka mid ah dagaalka loogu talagalay Android iyo iOS
Farshaxanka Elektiroonigga ah wuxuu rabaa inuu saameyn ku yeesho dagaalka caanka ah ee loogu talagalay barnaamijyada kala duwan sida Android iyo iOs, oo ku cusub isdhexgalka dhexdooda.
Nooca xiga ee Belaayada Inc oo leh cudurro dhab ah iyo adduunyo kale
Cudurka 'Plague Inc' waa mid ka mid ah cayaaraha saameynta ugu badan ku yeeshay dhawaanahan iyadoo soo jeedineysa istiraatiijiyadda sida loo abuuro virus baabi'iya isirka aadanaha.
Dagaalkii Qabiilooyinka wuxuu yimaadaa Android
Isku dhaca Qabiilooyinka ayaa ah ciyaar istiraatiijiyad soo jiidasho badan leh oo u timaadda Android ka dib safarkiisa ku saabsan iOS.
Wadarta Guul, istaraatiijiyad Gameloft oo caadi ah
Gameloft wuxuu ku dhacaa istiraatiijiyad caadi ah oo leh 'Total Conquest'.
Boqortooyada Rush Frontiers ayaa ugu dambeyn lagu sii daayay Android
Boqortooyada Rush Frontiers waa mid ka mid ah cayaaraha ugu wanaagsan ee difaaca munaaradaha ee Android, oo maanta la sii daayay iyo in aad ka iibsan karto Google Play.
Laba sano ka dib Fifa 2014 ee loogu talagalay Android
Kadib labo sano oo sugitaan ah, EA Sports waxay go'aansatay inay soo bandhigto ciyaarteeda hamiga leh ee Fifa 2014, gabi ahaanba waa bilaash Google Play
Little Big City, dhismaha Gameloft
Little Big City waa soo jeedinta dhismaha iyo maaraynta Gameloft.
Ciyaaraha iyo codsiyada ugu badan ee WTF !!! (Ciyaaraha doqonnimada sare)
Waxaan soo bandhigi doonnaa ciyaaraha ugu badan ee WTF (carrab la ') iyo barnaamijyada kaa yaabi doona inta ugu badan mana ahan sababta oo ah waxay leedahay waxyaabo badan oo tayo sare leh ...
Dhirta vs. Zombies 2 ayaa imanaya Android deyrtaan
Ifafaalaha sanadka, Dhirta vs. Zombies 2, wuxuu ka iman doonaa gacanta EA iyo Popcap ilaa Android.
Terraria waxay ugu dambeyntii timid Android ka dib markii ay soo baxday Minecraft laakiin 2D
Terraria waa waxa ay tahay 'Minecraft' laakiin 2D, waa adduun u gaar ah oo aad ka bilaabi doontid xiisahaaga abuurista iyo la dagaallanka dhammaan noocyada wuxuush.
Professor Layton walaalkiis wuxuu hadda ku jiraa Android
Ciyaarta ugu horeysa waxay nooga imaaneysaa gacanta Level5 oo uu jilayo Alfendi Layton, oo ah walaalka borofisarka mala awaalka ah.
Real Racing 3 waxay heshaa Baabuurta Muruqyada leh DLC cusub
Real Racing 3 waxay heshay DLC ay jilayaan Baabuurta Muruqyada Mareykanka.
Layton 7 ee cajiibka ahi wuxuu ku soo socdaa Android
Layton 7, oo ah heerka ugu cusub ee 5, ayaa imanaya iOS iyo Android.
Laba xakameeyayaal cusub oo Android ah oo ka socda MOGA
MOGA waxay horey u sii amartay labo ilaaliyeyaal ciyaarta weyn ee aaladaha Android loo yaqaan Moga Hero Power iyo Moga Pro Power.
"Waraaqo, fadlan" wuxuu ku dhamaan doonaa Android
Cinwaanka asalka ah ee Lucas Pope, "Waraaqo, fadlan" wuxuu yeelan doonaa nooca Android.
Konami Contra: Evolution wuxuu hadda ku jiraa Android
NES-da caadiga ah ee 'Contra Contra' waxay la timid dib u habeyntiisa Contra: Evolution.
Qorraxda, dayaxa iyo xiddigaha ku jira nooca cusub ee 0.7.3 ee daabacaadda 'Minecraft Pocket Edition'
Nooc cusub oo loogu talagalay Minecraft Pocket Edition ee loogu talagalay Android, kaas oo keena horumar muuqaal ah sida qorraxda, dayaxa iyo xiddigaha oo aad ugu raaxeysatid xitaa inbadan.
Playstation All-Stars Island, ciyaarta Sony iyo Coca-Cola
Playsation All-Stars Island waa midowga ka dhexeeya Sony iyo Coca-Cola oo sameeyay ciyaar fiidiyoow ah.
Samatabbixin Boo in wuxuush Inc. Orod
Wuxuushkii Sully iyo Mike wali waxay raadinayaan Boo in Monsters Inc. Run.
Excalibur, oo dhinac u duuban MMO
Midka ugu cusub ee laga helay R2Games, Excalibur, wuxuu isu keenayaa MMO RPGs oo leh aragtida 2,5D.
Riptide GP2 hadda waa la heli karaa
Qaybta 'Vector Unit' waxay iibinaysaa qaybtii ugu dambaysay ee iibinta tartanka biyaha, Riptide GP2.
Dhimashada Socodka: Weerarka, zombies leh taabasho istiraatiijiyad ah
Nooc ahaan sida looga faa'iideysto sida zombies, The Walking Dead: Weerarku wuu ogyahay sida loo kala saaro.
Waqtiyada firaaqada ah Larry: Dib ayaa loo cusbooneysiiyay hadda
Ciyaaraha Ciyaaraha ayaa soo saaray dib-u-habeyntii caadiga ahayd, Leisure Suit Larry: Reloaded.
Ittle sayax, Zelda loogu talagalay Android
Ittle Dew, ciyaar la mid ah kuwii hore ee Zelda ee ay soo saartay shirkadda Ludosity, ayaa soo degaysa.
Qorshayaasha mustaqbalka iyo nooca cusub ee Minecraft Pocket Edition
Nooca cusub ee 'Minecraft Pocket Edition' oo leh horumarin waxqabad iyo cilad hagaajin, oo lagu daray soo bandhigida qorshooyinka mustaqbalka sida adduunyo aan dhammaad lahayn
Ciyaar cusub oo ka socota Kairosoft, Pocket League Story 2 oo leh qaab ciyaartoy badan
Kairosoft, oo ah shirkad caan ku ah sameynta jilitaanka weyn, dhismaha iyo ciyaaraha rpg, ayaa ka soo muuqanaya Pocket League Story 2.
Saaxir 2014: Duels of Planeswalkers Hada La Heli Karo
Xuquuqda halyeeyada kaararka ganacsiga ayaa hadda leh cinwaankeeda cusub ee laga heli karo Android, Magic 2014: Duel of the Planeswalkers.
Halyeeyada Amarka & Fowdada, Gameloft's MOBA, ayaa helay cusbooneysiin
Heroes of Order & Chaos, MOBA oo ka socda Gameloft, ayaa heli doona cusbooneysiin maalmaha soo socda. Faahfaahintaada fiidiyowga ah.
Nacasnimo Me 2 sidoo kale wuxuu leeyahay ciyaar rasmi ah
Despicable Me 2 sidoo kale wuxuu leeyahay ciyaar mobilo ah, orod xiiso leh oo aan dhammaad lahayn oo loo yaqaan Minion Rush.
Gangstar Vegas hadda waa la heli karaa
Gameloft's sandbox-keeda cusub, Gangstar Vegas, ayaa hadda la heli karaa si loo soo dejiyo.
Might & Magic: Dagaalkii Geesiyaasha, sidoo kale Android
Might & Magic: Dagaalkii Geesiyaasha ugu dambeyntii wuxuu gaarayaa boosteejooyinka Android.
Age of Empires ayaa imanaya Android
Microsoft waxay sii deyn doontaa noocyada mobilada loogu talagalay Da'da Boqortooyada, oo ay ku jiraan iOS iyo Android.
Square Enix wuxuu bilaabay Drakerider on Android
Square Enix wuxuu sii wadaa taageerida aaladaha mobilada wuxuuna bilaabay Drakerider.
Gangstar Vegas Dev Xusuus-qor
Gangstar Vegas waxoogaa ayuu ku sugnaa barnaamijka IOS. Marka ay timaado Android, waxaan wax ka ogaan karnaa wax badan oo ku saabsan cinwaanka.
LEGO Star Wars: Taariikhda Yoda ayaa hadda soo baxday
Kaddib keli ahaanshaha boosteejooyinka Xperia, LEGO Star Wars: Taariikhda Yoda hadda waa la heli karaa.
Dagaalada dhabta ah ee udhaxeeya robotyada feedhka mahadsanid CloudRobot
Aaladda robotada feerka ee loo yaqaan 'Cloud Robot' ayaa ka muuqata E3, heshiiska cayaaraha fiidiyowga ugu muhiimsan ee warshadaha. Dagaal u dhexeeya aalado feer oo dhab ah.
Cusbooneysiin ballaaran oo ah Fruit Ninja Bilaash ah oo leh qaab ciyaareed badan oo maxalli ah iyo seefo cusub, sooyaal iyo miro badan
Cusboonaysiin ballaadhan oo loogu talagalay Fruit Ninja Free oo ah wax lagu farxo in la rakibo, oo keenaya qaab cusub oo multiplayer maxalli ah, seefo cusub iyo awoodo gaar ah.
Nooca cusub ee 'Minecraft Pocket Edition' oo ay la socdaan server-yada Realms, xabadaha, dabka iyo waxyaabo kale oo badan
Dabka, ukunta, caanaha, keega, xabadaha, iftiinka jilicsan, sheekaysiga, menusyada cusub iyo nooca alfa ee shirkadda 'Minecraft Realms' oo nooca 0.7 ah ee 'Minecraft Pocket Edition'.
Belaayada Inc Mutation 1.6 ayaa mar kale ku dhici doonta Android bisha Ogosto
Belaayada Inc Mutation ciyaar ka yaabisay dadka deegaanka iyo shisheeyaha waxay u keeni doonaan xagaagan, fursado badan oo looga cirib tiri karo isirka aadanaha meeraha.
Dagaalkii Dunida Z hadda waa la heli karaa
Dagaalkii Adduunka ee Z, cinwaankii xayeysiinta ee filimka uu jilay Brad Pitt, ayaa hadda soo baxay.
Aaway biyahaygii wuxuu helayaa cusbooneysi diiradda saara Allie
Aaway biyahaygii Hel heerar cusub oo diiradda saaraya Allie, Yaxaaska Swampy wuxuu leeyahay burburin.
Pixel Press, sawiro cayaarahaaga
Pixel Press, waa mashruuc asal ah, wuxuu ubaahanyahay tabarucaad maaliyadeed oo ku saabsan Kickstarter-keeda.
Boqortooyada Rush ugu dambeyntii waxaa laga heli karaa Android, ciyaarta aadka u adag ee Difaaca Difaaca
Kingdom Rush, waa ciyaar aad u qurux badan oo la qabatimo ugu dambeyntiina ku timaadda Android, oo loo hibeeyay gameplay aan ku seegnay nooca difaaca ee Tower
Dagaalkii Dunida Z wuxuu yeelan doonaa kulankiisa Android
Dagaalkii Dunida Z wuxuu yeelan doonaa ciyaar rasmi ah oo la sii deyn doono bisha Juun. Waxaan ku tusaynaa trailerka.
"Artemis Spaceship Bridge Simulator" wuxuu yimaadaa Android
In ka badan jilitaanka jilitaanka booska ayaa imanaya Android, Artemis Spaceship Bridge Simulator.
Feerka Daanyeerka, daanyeerku wuxuu ku dagaallamaa mobilkaaga
Feerka Daanyeerka, oo ka socda Ciyaaraha Bisha Cas, wuxuu na siiyaa suurtagalnimada in daanyeero lagu dhex dagaallamo.
4 Sawiro 1 Erey - Waa Qiyaas Ciyaarta Qiyaasta
Ciyaartan waxay na siinayaan 4 sawir iyo 12 xaraf oo shaashadda ka hooseeya si la mid ah kuwan ...
10 milyan oo nuqul ayaa laga iibiyey Mashiinka Pocket Edition
Jebinta diiwaanada, Minecraft Pocket Edition waxay maamushaa in ay dhaafto tirada 10 milyan oo nuqul oo lagu iibiyay nooca mobilada.
Gangstar Vegas, mashruuca cusub ee Gameloft
Gameloft wuxuu horey u diyaariyay sii deyntiisa cusub, Gangstar Vegas.
Boqortooyada Pixel, RPG istiraatiiji ah
Boqortooyada Pixel waa iskudhafka noocyada noocan oo kale ah sida difaaca munaaradaha iyo RPG-yada.
8 Qaybaha Live Wallpapers, asalka animated of 80 ee kulan
8 Bits Live Wallpapers waa codsi bilaash ah oo loogu talagalay Android oo leh asalka ugu wanaagsan ee dhaqdhaqaaqa ee ciyaaraha fiidiyowga caadiga ah.
Solstice Arena, MOBA cusub oo loogu talagalay Android
Solstice Arena waxay noqon doontaa Zynga cusub, MOBA oo lagu sii deyn doono iOS, Android iyo PC.
Ciyaartii Snoop Dogg ee "Dagaalkii Muusigga" Sidoo kale waxay u imaanaysaa Android
Ciyaarta Snoop Dogg, Way of the Dogg, ayaa imaaneysa Android iyo iOS xagaagan.
Guusha Zombie HQ ee Ios on our Android
Ciyaarta badbaadada Zombie HQ ee aan ku tijaabineyno xirfadaheena dagaal ee lagu dejiyay apoomiska zombie
Saaxiibada Xanaaqsan ee Xanrunta ah ayaa hadda diyaar u ah in laga soo dejiyo Play Store-ka
Nooca cusub ee Shimbiraha Xanaaqsan, oo loo yaqaan 'Angry Birds Friends' iyo qaabka ciyaarta khadka tooska ah, ayaa halkan loogu soo dejisan karaa bilaash.
Codsiyada Chorras ee usbuuca: Maanta dameerka hadlaya
Buttman: Ka hadalka dameerku waa barnaamij edebdarro ah oo edeb daran, oo aan ku habboonayn carruurta yaryar, taas oo kasbatay cinwaanka Crazy Apps of the Week.
Shimbiraha careysan ee Saaxiibada ah ayaa laga heli karaa 2-da Maajo Dukaanka Play-ka
Saaxiibada shimbiraha careysan waxay la yimaadaan Android iyagoo adeegsanaya qaabka cusub ee khadka tooska ah si aan ugu babacdhigno saaxiibadeena Facebook
Ninka Birta 3: Ciyaarta Rasmiga ah, Hada Waa Laheli Karaa
Ciyaarta rasmiga ah ee Iron Man 3 ayaa hadda laga heli karaa Google Play Store.
Leviathan Maraakiibta Dagaal ee istiraatiijiyadda qaboojinta xagaagan
Leviathan Maraakiibta Dagaal oo istiraatiijiyad ku dhisan istiraatiijiyad ku dhisan oo leh afar habab ciyaar oo kala duwan, iskaashi, khadka tooska ah, khadka toosan iyo qaab ololeyn.
CSR Racing hadda waa la heli karaa
CSR Racing waa ciyaar lagu tartamo oo la jiido.
Wuxuush Blade, ugaarsadaan wuxuush by gabal
Monster Blade waa wax sida Monster Hunter u isticmaala mobilka.
Monect, ku xakameyso kombuyutarkaaga mobilkaaga
Monect waa codsi isticmaalaha XDA Developers kaas oo kuu oggolaanaya inaad kumbuyuutarkaaga ku maamusho moobilkaaga.
Ciyaaraha kaararka 10-ka bilaash ah
Android waxay leedahay fursado badan oo ay ku ciyaaraan kuna raaxaystaan ​​waqtigaaga firaaqada ah, in kasta oo aynaan marnaba iloobi doonin dariiqooyinka ...
Racing Real 3 wuxuu helayaa cusbooneysiintiisii ​​ugu horreysay
Racing Real 3 waa la cusbooneysiiyaa iyadoo la helayo waxyaabaha la xiriira Chevrolet.
Warner Bros wuxuu taageeraa Android laba kulan
Warner Bros wuxuu bilaabayaa laba kulan oo ku saabsan Android, gaar ahaan Amazon App Store.
Nightsky HD oo hadda laga heli karo Android
Nightsky HD, safarkiisa ka dib PC-ga wuxuu yimaadaa Android.
Hitman: ICA, codsiga rasmiga ah ee loogu talagalay Android
Wakiilka 47 horeyba wuxuu uhelay barnaamijka mobilada ugufiican, Hitman: ICA.
Shadowgun: Deadzone 2.0 waa cusbooneysiin weyn
Ciyaaryahanada badan ee 'Shadowgun' ee loo yaqaan 'Deadzone' ayaa hela casriyeyn weyn.
Gamestick iyo ciyaaraha bilawga
Gamestick, qalabka 'PlayJam', wuxuu la imaan doonaa ciyaaro horay loo sii rakibay. Waxaan kuu sheegeynaa kuwa.
Sixir Ururinta: Duels of the Planeswalkers 2014 imanaya Android
Waxaan sidoo kale ku heli karnaa qaybteena TCG ee Android oo leh 'Magic The Gathering'.
Sheekada Cayaaraha: Burburi!, Sagaalkii weynaa ee Pixar ayaa isku aaday
Sheekada weyn ee Pixar, Toy Story, waxay ku timaadaa Android.
Stargate: SG-1 La sii daayay, saynis-fi ah oo taabasho Isbaanish ah
Alkaris Interactive, andorrando istuudiyaha, wuxuu nagu daaweeyaa Stargate: SG-1 Waa La Furay.
Temple Run: Oz wuxuu ku degaa Android
Daahfurka cayaaraha sida suuqgeynta filimada cusub shaki la’aan waa guul. Temple Run: Oz, waa tusaalaha ugu dambeeyay.
Birta Slug X waxay u timaadaa Android si ay u xasuusato waqtiyadii hore
Nooca cusub ee ciyaarta taariikhiga ah Birta Slug X waxay la timid horumarin ka badan tii hore, taas oo ka dhigaysa ciyaar la qabatimo iyo madadaalo badan.
Sanduuqa Sandbox-ka, Ilaah ha noqdo Android-ka
Sanduuqa Sanduuqa waa sanduuqa sanduuqa ee sarbeebta ah kaas oo aan ku sameyn karno wax kasta oo aan ka fekeri karno sida iyo sida aan uga fikiri karno.
Pokémon TV, taxanaha mobilkaaga
Pokémon wuxuu yimaadaa taleefanadeena. Dabcan, qaab taxane ah oo lala yeesho Pokémon TV.
Codsiyada Chorras ee usbuuca
Qeyb cusub oo ku jirta Androidsis halkaas oo aan dooneyno inaan ku soo uruurinno codsiyada ugu wanaagsan ee usbuuca.
Meel marin dhiig leh oo ka socota shisheeyaha iyo shisheeyaha
Vector, parkour mobilkaaga
Waxaan kuu keenaynaa Vector, ciyaar orod weyn oo aan dhammaad lahayn oo diiradda lagu saaray parkour.
RIOT, mudaharaadyo moobilkeena ah
Waxaan ka hadlaynaa RIOT, oo ah soo jeedin diiradda lagu saaray khalkhalka waddooyinka oo xiiso u leh sidii ay asal ahaan u ahayd.
MWC 2013, Sony waxay diyaarisaa barnaamijka Play Station 4 ee loogu talagalay Android iyo iOS
Sony waxay diyaarinaysaa codsi loogu talagalay Android iyo iOS oo aan si toos ah ugu ciyaari karno ciyaaro taleefannada casriga ah ama kaniini.
Simpsons The: Springfield wuxuu yimaadaa Android
Homer iyo shirkaddu waxay u yimaadaan Android iyagoo la socda The Simpsons: Springfield.
Gamestick - qalabka ciyaarta fiidiyowga cusub ee loogu talagalay Android
Gamestick waa xakameeye iyo fiidiyoow fiidiyoow ah isla waqtigaas, kaas oo si gaar ah loogu talagalay Android.
Birta Slug 2 ayaa hadda baxday
Birta Slug 2 ayaa hadda laga heli karaa Google Play Store oo ka socda SNK Playmore iyo DotEmu.
Valentine wuxuu yimaadaa Meeday dabaaldegaygu?
Aaway dabaaldegaygu? waxaa la cusbooneysiiyaa munaasabadda Maalinta Jacaylka, iyadoo la helayo 12 heer oo cusub oo ay jilayaan Swampy iyo Perry.
Guutada Blitz waxay umuuqataa mid fiican
Ma jiro taariikh qeexan weli, laakiin Gameloft's Blitz Brigade waxay umuuqataa wax kafiican.
Top 5 kulan multiplayer online for Android
Googlelizados waxaan ku sameynay xulashada 5-ta kulan ee ugu badan ee ciyaartoy badan oo laga heli karo Google Play ...
X-Plane 9, jilitaan jilicsan oo jilicsan oo loogu talagalay Android
Ciyaar duulimaad macquul ah, ku soo dejiso X-Plane 9 bilaash oo xukuma cirka
Shimbiraha Xanaaqsan Dagaalkii Xidigaha Geeska Oo Dhamaystiran
Shimbiraha careysan ee Star Wars waxay sii wadaan inay helaan casriyeyn joogto ah. Hadda waa waqtigii la dhammaystiri lahaa qaybta 'Hoth-centric'.
Monster Hunter wuxuu leeyahay nooc u gaar ah Android
The Monster Hunter Sagaarka ugaarsiga bahalnimada wuxuu la yimid nooc gaar ah oo loogu talagalay Android
Temple Run 2 ayaa hadda la heli karaa
Hadda waxaad geli kartaa Google Play Store oo aad kala soo bixi kartaa Temple Run 2. Aan tagno!
Duncan iyo Katy, ciyaar Isbaanish ah oo madadaalo leh
Duncan iyo Katy waa cinwaan cusub oo madadaalo u ah Android ka sameeyay Spain.
Ikaruga, taariikh kale ayaa timaada Android
Nooc kale oo weyn, oo la sii daayay kow iyo toban sano ka hor, ayaa imanaya Android. Toogashada ilaa Ikaruga.
Ciyaaraha ugu Fiican ee Cabitaanka Android
Waxaan ku jirnaa jiirada bisha Janaayo waana daqiiqad khatar ku ah qof walba. Sababtaas awgeed, dad badan ayaa doorbida inay la kulmaan ...
BlueStacks emulator wuxuu yimaadaa Windows 8
BlueStacks waa emulator awood leh oo ku shaqeeya barnaamijyada Android ee hadda ka shaqeeya Windows 8
Moga Pro - Maamulaha Ciyaaraha Cusub ee Android
Iyada oo Moga Pro ah ayaa loo soo bandhigay si ay awood ugu yeeshaan inay si firfircoon ula falgalaan ciyaaraha fiidiyowga ee Android iyo iyada oo loo marayo isku xirnaanta Bluetooth.
Gurigu wuxuu leeyahay suurtagalnimada inuu gaaro Android
Ciyaarta naxdinta leh ee Indie Home ayaa ku socota macruufka iyo Android.
Google iyo liiska kulamadii ugu fiicnaa 2012
Google waxay soo bandhigtay liis ay ku qorantahay ciyaartooydii loogu soo dejisan jiray Android inta lagu gudajiray sanadkii 2012, kadis iyo ciyaaro horey loogu yaqaanay inay xusaan sanadka
Macdanta Birta ayaa dib loogu soo daabacay Android
The Arcade classic Birta Slug wuxuu ka yimaadaa Android ka SNK Playmore iyo DotEmu.
Soulcraft, RPG hadda waxaa lagala soo bixi karaa Google Play
Soulcraft waa RPG muddo dheer la sugayay oo soo galay beta bishii Janaayo ugu dambayntiina hadda waxaa loo heli karaa in laga soo dejiyo Google Play Store.
Aaway Dabaal-daggaygii?, Ciyaarta Ciida Kirismaska ​​ee Disney
Haddii aan ku biirno dabeecadda soojiidashada leh iyo Perry ciyaar kirismas ah waxaan leenahay Aaway dabaaldegaygii?
Ciyaaraha ugu fiican iyo barnaamijyada sanadka
Inkasta oo aysan ahayn liis rasmi ah sida aan ka heli karno App Store oo leh barnaamijyadooda ugu fiican iyo ...
Qalabka hadiyadaha (IX): Geeska
Maanta Ciyaaraha Hadiyadaha ah waxaan ka hadleynaa Geeska, oo ah ciyaar xiiso badan.
EpiX, waa ciyaar cusub oo Isbaanish ah, oo timaadda Android
Isbaanishyada Blinzy waxay leeyihiin kulan cusub oo loogu talagalay Android, EpiX.
Ciyaaraha hadiyadaha (VII): GTA III
Aniga oo ka faa'iideysaneyna xaqiiqda ah in aan ku jirno usbuucii bilowga daabacaadda sannad-guurada GTA: Magaalada Ku-Xigeenka, Ciyaaraha ...
Ciyaaraha Hadiyadaha (VI): «Baahida Xawaaraha: Aad baa Loo Raadiyaa»
Qaybteena toddobaad ee Ciyaaraha Hadiyadaha waxay mar kale diiradda saarayaan wadista, waxaan dib u eegeynaa Baahida Xawaaraha: Inta badan La Raadinayo.
Pendulo Studios 'Shalay Wuxuu Imaanayaa Android
Mid ka mid ah hal-abuurradii ugu dambeeyay ee ka yimaada dadka ku sugan Studio-yaha Pendulo, Shalay, wuxuu yimaadaa Android.
Qalabka Hadiyada (V): Asphalt 7
Maanta haddiyadaha haddiyaddu waxay ku yimaadaan gawaari, Asphalt 7.
Noocyada hadiyadaha (IV): "Dagaallada casriga ah 3: ummad dhacday"
Waxaan kuu soo qaadaneynaa qeybtii afaraad ee Ciyaaraha si aad u siiso, oo ku habboon xilliga kirismaska. Maanta: "Dagaalkii casriga ahaa 3: ummad dhacday"
Monopoly Millionaire, waa nooc deg deg ah oo ka mid ah ciyaarta guddiga caadiga ah
Monopoly Millionaire waa nooc cusub, dhakhso badan oo firfircoon oo ah iibinta iyo iibinta ciyaarta caadiga ah ee hantida caadiga ah, diyaar ma u tahay caqabadda?
Badbaadiyeyaasha, laga bilaabo tartanka telefishanka ilaa Android Game
Badbaadiyeyaashu waxay ka yimaadaan telefishanka ilaa Play Store oo ku jira qaab ciyaar gebi ahaanba bilaash ah, iyada oo tijaabooyin ay dhiirrigelinayaan barnaamijka caanka ah iyo habka ciyaarta khadka tooska ah
Shimbiraha careysan ee Star Wars dib u eegis
Waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqeynteenna Dagaalkii Xiddigaha Xiddigaha Xanaaqsan.
SaveShare, ciyaarahaaga daruuraha
Ma rabtaa inaad badbaadiso horumarka ciyaaraha fiidiyowga ee daruuraha oo aad awood u yeelatid inaad ku raacdo qalabka kale? SaveShare way u oggolaanaysaa.
Zombiewood hadda waa bilaash Google Play
Gameloft ayaa hadda bilaabay Zombiewood, oo ah ciyaar ficil cusub oo noo geynaysa magaalada Los Angeles si loo burburiyo tirada zombies.
Haunted Hogs, qeybta cusub ee Xilliyada Shimbiraha Xanaaqsan
Xilliyada Xilliga Xanaaqda careysan waxay soo bandhigayaan dhacdo cusub oo ku saleysan ciidaha Halloween, cabsida iyo ficillada ay la leeyihiin shimbiraha aad ugu jeceshahay Android
Kubadda Cagta Real 2013, kubada cagta ugu fiican Android-kaaga
Real Football 2013 waa ciyaar bilaash ah oo ka socota Gameloft halkaas oo ay tahay inaan mas'uul ka noqono jihada koox kubada cagta ah inta ugu badan
Barnaamijyada Halloween ee ku jira Android oo ay la socdaan Charlie Brown iyo saaxiibbadiis
Ugu dabbaaldeg Halloween sida ugu habboon Android-kaaga iyada oo leh Bocor weyn, Charlie Brown oo leh astaamaha Snoopy (Lawska)
Mustaqbalka ciyaaraha fiidiyowga ee Android iyo qalabka kombiyuutarka
Ciyaaraha fiidiyowga ee Android ayaa calaamadeeya mustaqbalka warshadaha, gameplay cusub, awood dheeri ah iyo sawirada mustaqbalka ee farahaaga
Waxqabadka Anthology, ciyaaraha caadiga ah ee mobilkaaga
Ka ciyaar Atari 2600 Classics oo bilaash ah taleefankaaga gacanta ee Android mahadnaqa 'Activision Anthology'
Wicitaanka Mini: Zombies, ficil dheeraad ah iyo undead
Wicitaanka Mini: Zombies waa ciyaar zombie iyo undead loogu talagalay Android halkaas oo aan ka sameysan karno kooxo ka kooban afar ciyaaryahan si ay ula dagaallamaan
Shisheeye iyo Ugaadhsade, dagaalkii shisheeyaha ayaa yimid Android
Shisheeye iyo Ugaadhsade ciyaarta waxqabadka cusub ee aan ku ogaan doonno jinsiyada shisheeyaha ee ka xoog badan
Ocean Tower, ku dhisto daarahaaga gaarka ah Android
Ocean Tower waa jilid iyo ciyaar dhisme halkaas oo ay tahay inaan dhisno dhismayaal dhaadheer oo u gaar ah oo aan u qurxinno sida aan rabno
Neuroshima Hex, dagaal iyo istiraatiijiyad ku saleysan leexasho
Heuroshima Hex waa ciyaar istiraatiijiyad ku dhisan istiraatiijiyad loogu talagalay Android oo ay ka muuqato loox iyo kaarka ciyaarta
Nolosha 'Monster', ku kici xayawaankaaga Android
Nolosha Monster waa ciyaar cusub Gameloft ee loogu talagalay Android halkaas oo aan ka abuuri karno oo aan ku tababbari karno xayawaankeena si ay ula dagaallamaan
Black Ops Zombies loogu talagalay Android
Black Ops Zombies waxay u timaadaa Android si ay u siiso khibrad FPS ah oo cajiib leh ciyaarta khadka tooska ah
AR Magical Battle, xaqiiqda la kordhiyay iyo difaaca munaaradda wada
Ciyaar dhab ah oo cusub oo la kordhiyay oo loogu talagalay Android oo leh astaamaha difaaca munaaradda iyo xiisaha
Asphalt 7 iyo Dark Knight Rises, waa in la arko ciyaaraha Android
Qaar ka mid ah ciyaaraha cusub ee Android si ay ugu bilaabaan bisha Ogosto si weyn
Waxaan eegeynaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Ciyaaraha Madfinger. Dead Trigger waa ciyaar toosan oo madadaalo leh, aan macquul ahayn.
Seefta jaban: Agaasinka oo la Jaray Hada Ayaa Loo Heli Karaa Android!
Seef jaban: Agaasimihii gooyey ayaa ugu dambayntii loo sii daayey Android iyadoo la adeegsanayo sawirada HD ee la hagaajiyey iyo sheekooyin cusub oo sheekooyin ah
Max Payne Mobile, baare ayaa u yimid Android
Dambi-baare Max Payne iyo sheekadiisa aargoosiga iyo dhimashada waxay u yimaadeen Android iyagoo wata Max Payne Mobile, oo ah deluxe dib-u-daabacaad ciyaartii ugu horreysay.
Qiyaasaha Fantasy ee ugu dambeeya, doorka ugu fiican wuxuu yimaadaa Android
Sagaarka caanka ah ee 'Japanese RPG Final Fantasy' wuxuu ku yimaadaa Android iyadoo leh 'Fantasy Dimensions', oo ah cinwaan leh walxo dhiirrigeliya FF I, IV iyo V
Nyko waxay diyaarisaa ilaaliyaal cusub oo loogu talagalay ciyaaraha Android
Nyko waxay ku dhawaaqday ilaaliyaasha cusub ee PlayPad ee loogu talagalay ciyaaraha Android ee isticmaala NVIDIA Tegra chip waxayna ubaahantahay saxsanaanta.
Tartanka Gawaarida Yar, tartanka orodka badan ee Android
Mini Motor Racing waa ciyaar farsamo farsamo sare lagu dheelo oo lagu ciyaaro xatooyo halkaasoo aan kula tartami karno tartamada 4 saaxiibbo ah
Apalabrados, ciyaartii ugu soo dejisanayd Dukaanka Play
Apalabrados waa ciyaarta casriga ee ku socota Android, ciyaar erey-sameys ah oo ku jirta qaabka ugu nadiifsan ee loo yaqaan 'Scrabble' si loogu ciyaaro khadka tooska ah.
Aaway biyahaygii? ciyaar xujo leh oo dhan sixir iyo animated Disney style halkaas oo aan ku hanuunin biyaha dhex boqolaal heerar.
Zombie Lane, Zombie apocalypse on Android
Ilaali xaafadaada oo baabiiso zombies-ka Zombie Lane, is waafajin fiican oo ciyaarta Facebook ah halkaas oo aan ku dagaalami doonno joogsi la'aan.
Tuulada 'Ice Age Village', geesiyaasha 'The Ice Age' ayaa yimid Android
Ice Age Village waa ciyaarta cusub ee Android ee ka socota Gameloft, oo ay dhiirrigelisay jilayaasha ka soo jeeda filimada 'Ice Age'
Dude Perfect: Abuur caroms aan macquul aheyn oo ciyaaraya kubbadda koleyga
Dude Perfect wuxuu adeegsadaa makaanik la mid ah kuwa loo yaqaan 'virtuosos' oo dunk ka sameeya kubbadda koleyga diyaaradaha, tobanaan mitir isla markaana abuuraya caroms aan macquul ahayn
Rakaabka Haamaha: U buuxi carruurtaada khiyaaliga ah isla markaana kaxee taangigaaga
Tank Riders waa ciyaar aan loo baahnayn inaad ka maqnaato Android-kaaga, oo leh mawduuc fudud laakiin xiiso leh waxaan ku raaxeysan karnaa qaabka ololaha iyo qaabka ciyaartoy badan
Super Monkey Ball 2: Edition Sakura waxaa laga heli karaa 0,90 senti (Waqti Xaddidan)
SEGA waxay markale ku dartay hit kale oo loogu talagalay Android, Super Monkey Ball 2: Edition Sakura oo ah 0,90 euro senti muddo xadidan.
Qaybtan cusub, oo noqon doonta ciyaar cusub oo aan ahayn ballaadhin, shimbirahan soo jiidashada leh ayaa hawada gala. Mawduuca ciyaartu waa isku mid sidii had iyo jeer, shimbiraha waxaad ka tuureysaa slingshot waana inaad garaacdaa doofaarrada ukun-xada. Kaliya Meel Banaan oo Shimbiro Xanaaqsan ayaan ku dhex jiri doonnaa booska, sidaas darteed waa inaan sidoo kale tixgelinno cuf isjiidadka iyo fiisigiskeeda cusub. Cuf-isjiidadku wuxuu ciyaarta siin doonaa qallooc. Waxaan heli doonnaa asteroids iyo meerayaasha cufkooda ay ka dhigi doonaan shimbirahayaga inay ka leexdaan dhabbilahooda sidoo kalena soo jiitaan, shimbiraha, doofaarrada iyo dhammaan walxaha ka muuqda shaashadda.
Qualcomm Snapdragon GamePack portal cusub oo ciyaaraha ah oo lagu bilaabi doono afar ciyaarood oo cusub, Virtua Tennis Challenge, Reign of amira, The Reem, The Ball
Wuxuush Shooter: xiiso leh dammaanad in sacabka gacantaada
Monster Shooter waa ciyaar aad u xiiso badan oo animation-ka gacanta lagu sawirayo si aan nafteena ugu qaabeyno qaab muuqaal iyo muuqaal muuqaal qurux badan
Cusboonaysiinta: Xiddigaha Baseball Superstars 2012 oo bilaash ah oo loogu talagalay Android
Gamevil ayaa cusbooneysiiyay Xiddigihii Baseball-ka ee 2012-kii iyadoo la cusbooneysiiyay horumarro aad u muuqda oo garaaf ahaan ah iyo qaab-dhismeedka ciyaarta, waxaad uga soo dejisan kartaa bilaash suuqa android-ka.
Tuulada Smurf: Tuulada Smurf ee ku taal Android-kaaga
Dhammaan astaamaha buluugga ah ee carruurnimadaada ayaa imanaya Android! Waxaad awoodi doontaa inaad ku xasuusato tuulada pifufos ee ku yaal Android-kaaga si aad u kobciso una horumariso.
CPSEmu: Ku daydo ciyaaraha Capcom-ka caadiga ah ee Android-kaaga
Emps CPSEmu qalab kasta oo Android ah, waxaad ka ciyaari kartaa fasalada sida Street Fighter ee casrigaaga adigoon haysan kombiyuutar awood leh.
Daruuro & Ido: Ka taxaddar adhigaaga adhigaaga ka socda Android-kaaga
Daruuro & Ido waa ciyaar asal ah oo sheeko weyn leh, waxaan daryeeli karnaa adhigayaga adhiga ah, quudin karnaa, ka dhigi karnaa inay koraan
Zenonia 4: Soo noqoshada halyeeygaaga Android
Zenonia 4 waxay ku soo noqotaa Android markan iyada oo sawiro iyo muuqaalo fiican leh, nidaam PVP ah ayaa lagu daray iyo guulo cusub oo la gaarayo
CupidPuzzle, hadiyadda ugu fiican ee Maalinta Jacaylka
Maalinta Jacaylka waa maalinta ugu wanaagsan ee aad lamaanahaaga u muujiso inaad jeceshahay, laakiin haddii aad ...
Diyaaraddayda Warqadda 3: Hadda waxaad samayn kartaa diyaaraddaada warqadda ah inay duusho
Wavecade waxay soosaartay guul kale Android, ciyaar madadaalo ah oo loogu magac daray My Paper Plane 3 oo leh deegaanno 3D ah waa inaan sameysannaa diyaarad warqad ku duusha
Hada Android-kaaga waxaad kula tartami kartaa gawaarida kale ee Drag Racing, ciyaar ka duwan wixii aan u baran jirnay, balwadda iyo tartanka isla ciyaarta
TeamLAVA waxay markale gaadhay guul kale oo iib ah iyada oo ay ugu wacan tahay nidaamkeeda ciyaarta khadka tooska ah, ee sheekada NightClub waxaan abuuri karnaa goob naadi lagu caweeyo oo u gaar ah
Sonic 4: Nooc caadi ah ayaa yimaada Android
SEGA waxay soo saartay nooc kale oo loogu talagalay Android, hedgehog buluug ugu caansan taariikhda ayaa ku soo noqda taleefannada casriga ah ee Android
SpyMouse in yar oo jiir ah oo leh xirfad jaajuus ahaan
SpyMouse waa jiir yar oo Farsamada elektaroonigga ahi keento, jiirkani wuxuu qabatimay farmaajo waxaana lagu ridi doonaa in ka badan 70 guri si loo gaadho ujeedooyinkiisa
Shimbiraha Xanaaqsan Xilli iyo Sanadkii Masduulaagii
Toddobaadkan dhammaadkiisa cusbooneysiinta Xilliga Shimbiraha Xanaaqsan ayaa la heli karaa, taas oo shimbirahan saaxiibtinimada leh ay ugu dabaaldegi doonaan Sannadka Cusub ee Shiinaha kuwa ugu liita ee ka soo baxa dabaaldegganina waxay noqon doonaan doofaarrada sidii had iyo jeer ahayd.
Ciyaaraha la imaan doona Tegra 3
Falanqeyn yar oo ku saabsan ciyaaraha aan hadda ognahay waxay gaari doontaa aaladaha Android ee qalabeeya Tegra 3
Falanqaynta Ciyaarta Yar ee Weyn, dagaalka jeebkaaga ku jira
Mid ka mid ah sawirada ugufiican iyo ciyaaraha istiraatiijiyada ugu qosolka badan Suuqa Android,
Destinia, Falanqaynta Ciyaarta
RPG wanaagsan ayaa sidoo kale ku jira Android.
Naval Clash, Falanqaynta Ciyaarta
Dib u eegis ku saabsan Naval Clash, quusitaanka markabka ee loogu talagalay Android
DILAAHAHA QANDARAASKA: ZOMBIES, Falanqaynta Ciyaarta
Dib-u-eegiddayda ciyaarta zombie ee muhiimka ah.
Shimbiraha Xanaaqsan ee Cusub Xilli Halloween
Dhamaan macluumaadka ku saabsan cusbooneysiinta shimbiraha cusub
Arma II: Firing Range THD, ciyaar tayo leh oo ay xoojiso Nvidia Tegra
Cidhibta weyn ee Achilles ee Android waligeed waxay ahayd ciyaaro fiidiyow ah. Ilaa Nvidia ay sii deysay gogol ...
FIFA 12, oo u gaar ah Android
FIFA 12, oo u gaar ah Android.
Sixaxis maamusha: La ciyaar kumbuyuutarrada korontada ku shaqeeya ee ku shaqeeya Android-kaaga
Sixaxis maamusha: La ciyaar kumbuyuutarrada korontada ku shaqeeya ee ku shaqeeya Android-kaaga.
Kula ciyaar ciyaaraha Tegra Zone ee gaarka ah barnaamijkaaga 'Android'
Chainfire 3D si ay ugu maamusho ciyaaraha Tegra Nvidia Zone ee bilaashka ah Android
Dhirta vs. Zombies, waxaa laga heli karaa Amazon AppStore si aad u soo dejiso bilaash
Dhirta vs. Zombies, waxaa laga heli karaa Amazon AppStore si aad u soo dejiso bilaash.
Sony waxay dooneysaa inay lahaato ciyaaro gaar ah Xperia Play
Sony waxay si cad u shaacisay ujeedkeedu yahay inay horumariyaan ciyaarta fiidiyowga si ay ugu abuuraan ciyaaro gaar ah aaladda casriga ah ee loo yaqaan 'Xperia Play'.
Ciyaarta Guerrilla Bob ayaa timaadda Android
Ciyaarta Guerrilla Bob, oo ka socota shirkadda Angry Mob Games, ayaa loo sii daayay nidaamka hawlgalka mobilada ee Android.
N64oid, Nintendo 64 emulator ee Android
N64oid, Nintendo 64 emulator ee Android. Ka soo dejiso emulatorka N64oid Suuqa Android.
Nintendo DS emulator-ka loogu talagalay Android (In beta phase)
Nintendo DS emulator ee loogu talagalay Android, marxaladda tijaabada beta.
Midnimada Pro ee loogu talagalay Android, u beddel ciyaaraha macruufka ciyaaraha Android
In badan oo idinka mid ah ayaa ka warqabi doona in toddobaadkan la qabtay Shirka Horumarinta Ciyaaraha 2011, ...
Ku noqo Bullfighter Android-kaaga
dib u eegista ciyaarta ee android Torero
Kongregate Arcade, barnaamijka ciyaarta Flash ee bilaashka ah ee loogu talagalay Android
Thanks to Kongregate Arcade waxaad ku ciyaari kartaa wax ka badan 300 kulan khadka tooska ah oo waxaad ku raaxeysan kartaa ururinta ugu weyn ee ciyaaraha Flash-ka ee bilaashka ah ee taleefannada gacanta, oo kori doona toddobaad kasta
World of Dragons MMORPG, ciyaar isku dhafan oo loo heli karo Android
World of Dragons, oo ah kii ugu horreeyay ee isku dhaf ah ee MMORPG, oo ay soo saartay shirkadda CorsairBand. Haa, sidaad u aqrisay, ciyaartan waa mid isku dhafan oo waxaad ku ciyaari kartaa kumbuyuutarkaaga (adoo adeegsanaya shabakadda internetka), Facebook ama taleefankaaga Android
Videogames, qaladkii ugu weynaa ee Android?
Muxuu qofna ugu dagi waayey barnaamijyada barnaamijyada sida Eebbe ugu talo galay Android? Waxa Google ay hadda ku haysato Suuqa ugu badan waa madadaalo laakiin ciyaaro fudud.
Emulator Dreamcast ee loogu talagalay Android dhowaan soo socda
Maanta laga bilaabo Androidsis waxaan kuu keenaynaa war wanaagsan oo loogu talagalay dadka jecel ciyaarta fiidiyowga, emulatorka 'Dreamcast emulator' ee loogu talagalay Android ayaa la horumarinayaa
Geesiga ciyaarta Sparta ee loogu talagalay Android bilaash dhammaan Diseembar 22
Gameloft wuxuu sii wadaa ololihiisa hadiyadeed markanna waa markiisii ​​hore ee ciyaarta halyeeyada 'Android of Sparta'.
Daad badan oo ka mid ah kulamada waa weyn ayaa imanaya Android, miyaad tabi doontaa iyaga?
Meelo badan oo ka mid ah cinwaannada waaweyn ee ciyaarta ayaa ku soo socda nidaamka hawlgalka Android, sawirro waaweyn, saamayn weyn, bandhiggu wuu imanayaa
Ma jeceshahay inaad ku ciyaarto kubbadda pinball-ka ee 'Android' waad ku sii wadi kartaa sameynta
Ciyaaraha pinball-ku waa kuwo aad u balwad leh oo Android-ka waxaan ku leenahay dhowr ciyaarood oo nuucaan ah oo kaa dhigi doona waqti fiican
PapayaMobile waxay soo saartey waxa loogu yeero Game Engine taasoo suurta galineysa in lagu abuuro ciyaaro Android barnaamijkeeda bulshada iyadoo loo marayo luqado aan aheyn Java
Alchemy, imisa isku-dar ah ayaad u malaynaysaa inaad taqaan? - Khatar, ciyaar aad u balwad badan
Iyadoo Alchemy loogu talagalay Android waa inaan ogaanno waxyaabo ka dhashay midowga dhowr ka mid ah, ciyaar la qabatimo, mid aad u qabatimo
Cilad ku jirta Shimbiraha Xanaaqsan waxay kuu oggolaaneysaa inaad furto heerarka
Cayayaan laga helay ciyaarta shimbiraha careysan waxay kuu ogolaaneysaa inaad furto dhamaan heerarka ciyaarta
Immisa xusuus ayaan ku leeyahay Tetris! Anigana waxaan qiyaasayaa in haddii aad 30 sano ka sarreyso sidoo kale….
10 barnaamijyada Android ee loogu talagalay carruurta inay ku raaxaystaan ​​oo wax ku bartaan
10 codsi oo android ah oo loogu talagalay carruurta yaryar ee guriga ku jirta si ay wax u bartaan una baashaalaan
Avatar wuxuu yimaadaa Android
Ciyaarta Avatar waxay timaadaa boosteejooyinka Android
PSX4Droid emulator-ka 'PlayStation' wuxuu yimaadaa Android
PSX4Droid waa codsi laga heli karo suuqa Android oo noo suurta geliya inaan ku ciyaarno cinwaannada playstation-ka ee ku yaal bartayada 'Android terminal'.
Cirka Sharafta, iskudhufnaanta badan iyo ciyaarta isticmaale badan
Cirka ammaantu waa ciyaar iskudhaf ah oo badan oo adeegsadeyaal badan leh oo aad kula tartami karto Android-kaaga ka soo horjeedka iPhone-ka.
Ku dheji Super Mario Bross sida sawir gacmeed xayeysiis ah oo ku saabsan Android-kaaga
Laga soo bilaabo XDA wuxuu ka yimaadaa sawir-gacmeed firfircoon oo ah Mario Bross, oo ah tuug-yaqaan ugu caansan adduunka.
Gameloft wuxuu bilaabayaa 10 kulan oo loogu talagalay Android
Gameloft ayaa hadda ku dhawaaqay daahfurka 10 kulan oo loogu talagalay barnaamijka Android
Zeemote ayaa hadda soo saartay SDK-keeda loogu talagalay terminaalka Android ee ay horumariyayaashu ku samayn karaan kuna abuuri karaan barnaamijyadooda ama ciyaaraha ku habboon amarkan.
Asphalt 5 waa ciyaar orod baabuur 3D ah oo ka socota Gameloft.
Bingodroid, bingo on your terminal Android
Bingodroid waa codsi loogu talagalay Android (1.6 ama ka sareeya). Iyada oo aan ku ciyaari karno ciyaarta caadiga ah ee bingo meel kasta iyo wakhti kasta
Gariir 3 waayo, Android
Dhulgariir 3 ayaa diyaar u ah Android
Motorola Milestone oo leh ciyaaro 3D ah
Motorola Milestone waa terminal leh astaamo muuqaal oo aad u wanaagsan tanna waxaa lagu muujiyey fulinta cayaarahan 3D-ka ah
Haddii aad jeceshahay ciyaarta shataranjiga oo aad rabto inaad had iyo jeer yeelato guddi diyaar u ah inuu ku ciyaaro gacanta, waxaa horeyba u jiray ciyaar chess ah oo ku saabsan Android-keena Suuqa Suuqa.
Diiwaanka ciyaaraha ee loogu talagalay Android wuxuu bilaabmayaa in lagu kaydiyo nuqullo wanaagsan, kan ugu horreeya waa Speed ​​Forge 3D.